Isicelo se-CNC Machining technical | I-Blog | I-PTJ Hardware, Inc.
Ikhaya > Blog > Isicelo sobuchwepheshe
Izindawo Zokusebenza Ezihlukile Zesitampu Esibunjiwe
Ihardware precision shrapnel ingeyokunyathela izingxenye zensimbi, okuluhlobo lwezingxenye zomshini zasentwasahlobo ezisebenza ngokuqina. Kungokwesigaba sezinto zokwakha ze-elektroniki. Ishubhu lokunemba kwehardware lenziwe ngensimbi engagqwali noma imanganizi ngemuva kokwelashwa kokushisa
Indlela Yokuhlanza Ye-Manipulator Yezimboni
I-China yizwe elikhulu lokukhiqiza, futhi izinzuzo zomkhiqizo wendabuko ziyanyamalala kancane kancane. Ukushintshwa kokukhiqizwa kwemishini yimishini sekuyinto engenakugwemeka ekuthuthukisweni komphakathi, futhi amarobhothi ezimboni nawo adlala indima ebalulekile. Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okujwayelekile kwerobhothi, umsebenzisi kufanele agcine futhi ahlanze i-manipulator njalo. Ngakho-ke, yiziphi izindlela zokuhlanza ze-manipulator?
Indlela Yokukhethwa Nokuklanywa Kwendlela Yokuqonda Yesiphathamandla
Enqubeni yokuklama yomlawuli, kunezinketho eziningi zokubamba izindlela. Uhlobo luni lwendlela yokubamba ongayikhetha, ngaphezu kokucatshangelwa kwesakhiwo, kumayelana nezindleko zokusetshenziswa kanye nokusebenziseka okulula. Cabanga, ngemuva kwakho konke, into enhle idinga ukubhekwa njengeyonga izindleko.
I-Research On Ni-Si Alloy Slender Shaft Turning Technology
Yinto enzima ukucubungula futhi isetshenziswa kakhulu ku-aerospace, kwezindiza nakweminye imikhakha. Ukuzisika kwayo kuyiphuzu elinzima kubuchwepheshe besimanje bemishini. Ukuhlanganisa izici zezinto ze-nickel-silicon alloy, kuthatha oxhumana nabo benkampani ye-nickel-silicon ingxubevange njengesibonelo, ubuchwepheshe bokuphenya obucutshunguliwe buye bafundwa, futhi ubuchwepheshe obuthile bokushisa obusezingeni eliphezulu obugcinelwe i-workshop bugcinelwe indawo yokusebenzela. inani lohlelo lokusebenza.
Ukusetshenziswa Kwesistimu Ye-AC Servo Ku-Shelf Cold Roll Owenza Umugqa
Ukwethulwa kwenqubo yangaphambi kokushaya kanye nobuchwepheshe be-hydraulic stop shear kulayini wokukhiqiza obandayo wekholamu yokubeka akugcini ngokwandisa ibanga lokuklama nokunemba kokukhiqiza kokuma okuhlukanisiwe kwekholomu yokubeka, kodwa futhi kuyahlangabezana nezidingo ukwakheka nokuhlangana kohlelo lwesakhiwo sensimbi, futhi ilungiselela
Ukukhethwa Kwemishini Yesikhathi se-Crane Flange Plane
Enkambisweni yokufaka i-crane enkulu, ukuthamba kwe-crane flange kuzoshintsha. Umkhuba ojwayelekile ukwenza umshini wendiza ye-crane flange ngemuva kwenhlangano nokushisela kwenhlangano ye-crane base, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuthamba kwe-crane flange kuyahlangabezana nezidingo zomdwebo wokuklama.
Indima Ye-3D Printer In Prototype Model Making
Ngokuvamile, imikhiqizo eyenzelwe ayikwazi ukukhiqizwa ngqo ngobuningi. Uma sezinokukhubazeka, zizosuswa, okuchitha abantu, izinsizakusebenza nesikhathi. Isibonelo sinyathelo esidingekayo sokuqinisekisa ukwenzeka komklamo kunqubo yokuthuthukiswa komkhiqizo. Kuyindlela eqondile nephumelelayo yokuthola ukushiyeka, ukushiyeka, kanye nokushiyeka komkhiqizo owenzelwe, ukuze kuthuthukiswe okubhekiswe emaphutheni. Imishini yokucubungula ejwayelekile yamamodeli wesibonelo ifaka phakathi amathuluzi womshini wokulawula izinombolo we-CNC, amaphrinta e-3D, nemishini yesikhunta se-silicone.
Ukuthuthukiswa Futhi Isicelo Of Intambo Rolling Machining Technology
Ekuthuthukisweni nasekusebenziseni intambo yokudonsa imishini yobuchwepheshe, izinzuzo zokunemba okuphezulu kwemishini, ikhwalithi ezinzile, nokusebenza kahle kokukhiqizwa kwalobu buchwepheshe kusetshenziselwa ukuthuthukiswa nokusetshenziswa. Kubhekwa njengokwethenjelwa okuphezulu kwimishini ekhethekile yokwenza imishini yocingo. Ukusebenza kwamandla amakhulu kwangaphakathi kwezimoto kwenza ilungu elicijiwe Lidlale indima yokuxhuma kuzakhiwo zemishini.
I-Cnc Machining Quality Control Ye-Automobile Wheel Hub
Ngakho-ke, le ndatshana izohlanganisa isimo semishini yezindawo zezimoto kulesi sikhathi, ihlose ezintweni ezithinta ikhwalithi yemishini yezindawo zezimoto, iphinde ibheke ukuthi kwenziwa kanjani ngempumelelo ukulawula ikhwalithi nokuhlolwa kwemishini yehabhu yezimoto.
Isicelo Of Industrial Robot Machining Iyalayisha Futhi athula
Lo mbhalo uqala ukwethula ukwakheka, ukubaluleka kokusebenza kanye nezici zokulayishwa nokulayishwa kwezicelo zamarobhothi ezimbonini, kanye nokuhlaziywa okuningiliziwe kokuqina nokunemba kwamarobhothi ezimboni kumashini wamarobhothi asezimbonini ukulayishwa nokulayishwa kwezicelo, kanye nezinkinga zokululama ngokushesha ngemuva kokushayisana ukwehluleka. Inkinga ihlaziywa kabanzi futhi amasu wokuxazulula ukhiye ayahlaziywa. Okungukuthi, ubuchwepheshe bokuhlonza othomathikhi bokugcina kanye nobuchwepheshe obunamandla be-torque feedforward, ubuchwepheshe bokuthola ukushayisana, ubuchwepheshe bokuthola iphuzu, futhi ekugcineni kuphakanyiswa ukuthambekela kokuthuthuka kwesikhathi esizayo kokubambisana komshini womuntu kanye nokuhlanganiswa kolwazi.
Indlela Yesici Sesici Sezingxenye ze-3D Model
Isisekelo sokwakhiwa kwenqubo ukuguqulwa kolwazi lwengxenye kusuka kulwazi lokuklama ukucubungula ulwazi. Kubunjiniyela bangempela, ulwazi lokuklama lufakiwe engxenyeni yemodeli ye-3D nemidwebo ye-2D. Enkambweni yokuguqulwa kube ulwazi lokucubungula, umklami wenqubo udinga ukufunda ingxenye yemodeli nemidwebo ye-3D. , Ngokuzenzekelayo thola ulwazi lokuklama nezinqubo ezihambelanayo zokwakheka.
Ukuhlelwa Kwemizila Yenqubo Yezingxenye Zase-Aerospace
Ingxenye iqukethe izici eziningi zemishini, futhi isici ngasinye semishini sinezindlela eziningana zokuhambelana nemishini nezinsiza zokukhiqiza.
1 2 3 4 5 6 ... Last OLANDELAYO